Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>ájá ájá>> Wheel Sand Washer
edemede si: ájá ájá | oge: April 9, 2013 | Tag:ájá ájá	|
Egwuregwu Egwuregwu Wheel, Shanghai XSM bụ ngwá ọrụ na-ekpuchi ihe ọkụkụ, Wheel Sand Washer, ngwá ọrụ na-arụ ọrụ nke ígwè, ndị na-emepụta ihe igwe na-ebu ígwè. belt ebu, onye na-enye nri ọkụ, ihe eji ebu oku ezigara ya nkuku uhie, nkpọchi mmetụta, nnyeghari hydraulic bụ ihe na-eme ka a ghara ikpuchi ya, nke abụọ nke a obere jawcrusher, ihe na-esi ísì nyochaa nke atọ nke atọ na-ekpuchi jijiji na ihuenyo gbakwunyere nkọwa zuru oke nke ore ahụ na-eburu ya igwe mgbidi, igwe na-edozi Ngwọta nlekọta ọgwụ dị mma ndị na-arụ ọrụ magnet, igwe onu mmiri họrọ ọtụtụ ụdị mkpa ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a, ọ bụ naanị ọrụ nhazi ọ bụla, Shanghai XSM dabere n'ụdị ụdị gị bụ ngwá ọrụ m kachasị mma, Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị ga-akpọtụrụ anyị ma ọ bụ pịa aka nri akụkụ nke akara ngosi akara, ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ịchọrọ gị azịza zuru ezu.
Họrọ ụkwụ ájá ájá ejiri ya mee ihe maka mkpochapu ájá na ájá nkịtị na-ehichapu otu ngwa ngwa. A na-eji nke a eme ihe na ụlọ, mkpokọta osisi, ụlọ ọrụ ihe ọṅụṅụ na-egbuke egbuke, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdọ mmiri, na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ dị ntakịrị, ụfụ nke ájá na-erughị, nhicha dị ọcha wdg. Ọdịdị dị elu nke dị ọcha, na mgbatị dị elu iji mee ka ọ dịkwuo na nhicha, nhazi, mmiri nsị na ụdị ọrụ ndị ọzọ.
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Na-arụ na Atụmatụ:
1. Mmiri mmiri na-adịghị, nri nchekwa, enweghị mmetọ.
2. Wepụ ájá, adịghị ọcha, ezigbo ntụ ntụ.
3. Nhazi ezi uche, ịrụ ọrụ dị mma, enweghị ihe ọ bụla (ma e wezụga ihuenyo), ndụ ogologo oge
4. Ezigbo ziri ezi, ịba ọsọ ọsọ.
Ụkpụrụ ọrụ na-akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ:
Ebube nke V-belt na ụgbọala na-ebugharị na-agagharị nwayọọ nwayọọ. Aja na-abanye n'ime ịsa ahụ site na nri ahụ, site na arụ ọrụ nke na-agagharị, ájá na-apụta ma na-egwukọta ọnụ iji wepụ ihe ndị na-adịghị ọcha kpuchiri n'elu ma bibiri oyi mmiri vapor iji mee ka ọ dị mfe. A na-ewepụ ájá dị ọcha site na mma, ma wụba ya.
Nkọwa nke Wheel Sand Washer:
model Mgbaeti Wheel
(Mm) Nri nha
(t / h) ike
Rịba ama: Nkọwapụta a bụ naanị ntụpọ, mgbanwe ọ bụla dị n'okpuru igwe ụkwụ ájá.
← Ihuenyo egwu
Na-akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ →